Njengoba zonke izinduna zomhlangano ERussia yasendulo, Yaroslav Osmomysl - Ruric. Uyisemkhulu - Volodar Rostislavovich, Zvenigorod Prince (eyabusa kusukela 1085 by 1092) - kwaba umzukulu Yaroslava Mudrogo. Uyise, uVladimir Volodarevich (uthunjana Volodar Rostislavovich), aziwa futhi isidlaliso Vladimirka (iminyaka yokuphila - 1104-1153) kwaba isidali ubukhulu olulodwa Galician kanye umsunguli we lwamakhosi lokuqala Galician.
Ngokwakhe uJaroslav Osmomysl (c. 1130-1187) baqhubeka ibhizinisi likayise ngempumelelo lokuqoqa wonke amazwe Galician esimeni esisodwa. Vladimirka wayeshadile (by nokucabanga) USophia ucabanga ngaleli phuzu yaseHungary, indodakazi Kálmán mina, noma mina Kolomona Bookman (1070-1116). Njengoba singabona, eyaziwa, inkosi Hungarian ka Ariada Dynasty kwaba Umbusi ohlakaniphile, kanye ufunde indoda. Ngo-umthetho wafika enkantolo, njengoba isidlaliso "Osmomysl", ngokusho version version eyodwa, kusho "ukuba izingqondo eziyisishiyagalombili", futhi ngakolunye - "owazi ngezilimi eziyisishiyagalombili," okungukuthi neze oyisiphukuphuku. Ngo 1149 Vladimirka Volodarevich liphetha isikhulu eMoscow Yuri Dolgoruky umbimbi aqondiswe Kiev Prince Izyaslav Mstislavovich (izikhulu wokuqala Russian, okuyinto Hypation Chronicle elikubiza ngokuthi "inkosi"), ngoba Galician Nezikhulu wazama lethu lithole inkululeko kusuka Kiev. Ukweseka Union izingane izikhulu ukushada - Yaroslav Osmomysl ashade Olgu Yurevnu.
Lokunyuka yesihlalo sobukhosi
Ngo 1153, ngesikhathi ibambene impi Izyaslav II Mstislavovich lapho Vladimirka kakade lezi zingelosi zabamba umuzi emfuleni Gorin, isikhulu efa ngokuzumayo, futhi boyars Galician ukubeka esihlalweni sobukhosi Yaroslav Vladimirkovicha abagcona wazama ukuqinisekisa Grand Prince Kiev Izyaslav othandweni lwabo fb futhi ukuzithoba. Eqinisweni, noma lowo muntu boyars bakhe bazama ukuthola isikhathi akacabanganga ukubuyela emizini yanqotshwa. Futhi Izjaslav Mstislavovich futhi ulwa emelene galich edlubulundayo. Ngaphansi Terebovlya (16 Februwari 1154) empini olunegazi eyathatha usuku lonke futhi baqede ebusuku kakhulu, decisive ahlula akenzanga eyodwa, amasosha wona ahoxiswa. Izyaslav ukuba baphinde bakwethembe bawuthumba umuzi, futhi maduze, efanayo 1154, wafa. Phezu kwesihlalo sobukhosi Kiev Yaroslav ihlala umalokazana Yuri Dolgoruky, owayeyilungu sizana ongumakad 'ebona we Galicians. Nokho, ukuthula kanye ubudlelwane obuhle phakathi galich futhi Kiev akuzange kuhlale isikhathi eside, ngoba Yuri Dolgoruky ke sengithunyelwa kwelinye izwe e 1157, futhi nokubusa okukhulu III ihlala Izyaslav Davidovich.
Imbangi esihlalweni Galician
UJaroslav Osmomysl ayefungile nesitha umuntu umzala wakhe - abadingisiwe isikhulu Galician Ivan Rostislavovich Berladnik (endaweni abahlezi Berlad). Iminyaka yokuphila isimangalo esihlalweni sobukhosi Ivan Galician Rostislavovich - 1112-1162. Wahlala phansi phezu wokubusa omkhulu Izjaslav III ukubukelwa Berladnik ngethemba lokuthi ngokuthatha sobukhosi Galician, uyobe babuyele Kiev zonke ethumba Vladimirka edolobheni. Kamuva Prince Yaroslav Osmomysl kuyinto sezombusazwe ezihlakaniphile ezicashile, abese ephetha isivumelwano beyizitha, isibonelo, nendodana yakhe Izyaslav II Mstislav Izyaslavovichem. Ngenxa yalokho wokubusa kwakhe Kievan ubukhulu ukuwela kwamazinyo, kungonakalisa okuphakade internecine izimpi izindlalifa eziningi, futhi Galician lwaqina futhi waceba, kuzokhulisa edlulela emasimini amasha.
Ukuxoshwa isitha ngaphakathi
III Izyaslav, begqugquzelwa Berladnik, umfelandawonye Polovtsy, Turks and Berendeys ehlaselwa kugxilile eBelgorod Mstislav. Kodwa ngemva kokumkhaphela Berendeys waphoqeleka ukuba abaleke, ashiye esihlalweni sobukhosi Kiev. Weqa ekudingisweni Ivan Berladnik wafela ekudingisweni. OMfelandawonye Yaroslav futhi Mstislav Izyaslavovich ukunikeza isihlalo sobukhosi Kiev Rostislav Mstislavovich. Ngenxa yalokho, abaphikisi Yaroslav Osmomysl kwesokunxele, futhi izitha zangaphandle ngeke alinge ukuhlasela namandla, nekhono ekunqandeni isimo.
UJaroslav Osmomysl, ngesikhathi okubusa kwakhe aqiniswe futhi ahlanganiswe Galicia njalo umkhankaso ngokumelene Polovtsian futhi esabisa them ngokuphelele. Ukunika yokukhosela athunjiwe WaseByzantium Prince Androniku Komninu, umboni wemibono Yaroslav, ngemva nokubuyisana ne Prince kombusi WaseByzantium Manuel, asenza nabantwana yokugcina umfelandawonye ngokumelene baseHungary. On the Galician phansi impi kwakungenziwanga zigcinwe, futhi hhayi zonakale. Mayelana uJaroslav ozuza amandla ukuhlanganiswa kwemibuso futhi ku "Lay."
I umbango nge boyars
Nokho, ekuqaleni kokubusa kwakhe, bese uJaroslav njalo anqoba ngayo ukuphikisa we boyars. Ngokusho kobufakazi obungokomlando, kuphi Russia kwakungekho izikhulu endaweni force anjalo, kokubili emaphethelweni entshonalanga. self-ngeke yabo ukuba indoda ifinyelele eqophelweni ukuthi bahlala obala futhi ngesizotha wokushiswa esigxotsheni, Anastasia, le Yaroslav othandekayo, owakhandleka kakhulu wamzalela indodana engengaphansi othandekayo Oleg. Kulaba Yaroslav nendodana yakhe wagcinwa etilongweni, aze wenza isithembiso luhlanganise nomkakhe Olga, owayeneminyaka ePoland, futhi beshiyela abanye esihlalweni sobukhosi uVladimir, indodana yakhe. Olga ngikweluleke wabuyela galich, ngesikhathi isimemo boyars, kodwa wadedelwa ukuba inkululeko uJaroslav konyaka abuyiselwe igunya lakhe phezu ichopho enamandla ahlukile, wabuyisana indodana yakhe uVladimir, kodwa ngokulunga isihlalo sobukhosi namanje wayala by Oleg.
Ukuchuma ubukhulu kanye nokufa Yaroslav
Bavikela ubukhulu wakhe wokulwa nezitha zika zangaphakathi nezangaphandle, uJaroslav wanika amandla ukuba ukuthuthukiswa koMnotho Galicia. Lapho Leli dolobha lake lachuma yezandla, abezinye izizwe smart baphuthunyiswe ehhovisi. Zonke ukuhweba, omasha eduze iDanube, kwakuxhomeke Yaroslav Osmomysl, kusukela anakho port Small galich. Ikakhulukazi ubukhulu asebenzayo kwaholela ukuhweba nge Bulgaria futhi waseByzantium. UJaroslav Osmomysl, biography lathweswa iziqu ngo-Galicia 1187, endaweni efanayo, wembelwa khona futhi. Ngemva nje kokuqala wokubusa Oleg iye anobuthi, kanye uVladimir, eyise kuthunyelwe Przemysl, bathatha ngodlí i kwesihlalo sobukhosi Galician. Ngo-1939, isazi semivubukulo uJaroslav Pasternak ukuthi atholakele wangcwatshwa Yaroslav Osmomysl.
Yaroslav Osmomysl IBhodi ewela ngenkathi elichumayo okusheshayo feudalism e Prykarpattia uthi. Phakathi neminyaka engu-ehlezi esihlalweni sobukhosi galich Yaroslav Osmomysl wakwazi ukumisa nenhlokomo kulo lonke ubukhulu. Kabili wayinqoba Kiev futhi zitshalwa izikhulu omkhulu ebusa abaqotho kuye. Waqinisa ubuhlobo yangaphandle - nesikhulu Polish, inkosi yakwa-Hungary futhi yoMbuso WaseByzantium. Nge ubukhulu eMoscow ukuthi ngokwesiko zigcinwe kobungane nobudlelwane. Ukuze kokubusa kwakhe ngokuhlakanipha nabantu ababe ngaphansi kwamandla akhe, futhi uJaroslav wethiwa Osmomysl.
Ethempelini-Aztec unkulunkulu impi basembhoshongweni izingebhezi womuntu kwatholakala
5 ukuvinjelwa angajwayelekile eRoma Lasendulo
Iphunga vetiver? Iphunga ukuthi kunjani?
Ivesi feta, okuyinto lula ukufunda, zomculo kanye Airy
Kungani iphupho ijazi mink noboya? Dream ncwadi izokusiza ukuba uphendule lo mbuzo
Njengoba ezothatha isikhundla SNILS lapho beshintsha amagama ngemva komshado